नेपालमा पोष्टमार्टम गर्ने चिकित्सककै अभाव ! – Aajako Khabar: आजै अनि ताजै
नेपालमा पोष्टमार्टम गर्ने चिकित्सककै अभाव !
काठमाडौँ, २७ फागुन, पाेष्टमार्टम अर्थात मृत्युपछि गरिने मानव शरीरकाे परीक्षण । जसलाई हामी अटाेप्सी नामले पनि चिन्छाै । मानिसकाे अप्राकृतिक मृत्यु भएमा त्यसकाे कारण पत्ता लगाउन शवकाे परीक्षण गरिन्छ । कानूनले पनि अप्राकृतिक मृत्युमा शव परीक्षण गर्नु भनी उल्लेख गरेकाे छ ।
कुनै पनि अप्राकृतिक मृत्यु (दुर्घटना, आत्महत्या, शंकास्पद मृत्यु) भएमा मृत्युकाे कारण, समय, परिवेश, व्यक्तिकाे सनाखत लगायत विभिन्न कारण पत्ता लगाउन पाेष्टमार्टमकाे आवश्यक पर्छ । तर नेपालमा समग्र फरेन्सिक मेडिसिन अर्थात कानूनी चिकित्साले नै संरचनागत प्राथमिकता पाउन नसकेकाे त्रिवि शिक्षण अस्पतालकाे फरेन्सिक मेडिसिन विभागका प्राध्यापक डा. हरिहर वस्तीले बताए । उनी भन्छन्, ”याे विषयले कुनै प्राथमिकता नै पाएकाे छैन । यसकाे जिम्मेवारी कसले लिने हाे, कुन निकायले हेर्ने हाे केही विषयकाे टु‌ंगाे छैन ।”
मुलुकमा अहिले फरेन्सिक मेडिसिन (कानूनी चिकित्सा) विशेषज्ञ चिकित्सक मात्र ५५ जना छन्, जुन पर्याप्त छैन । फरेन्सिक मेडिसिन विभागमा १२ जना विशेषज्ञ छन् । उनीहरुले मासिक १ सय ६० देखि २ सयसम्म शवकाे पाेष्ट मार्टम गर्नुपर्छ । यससम्बन्धी विशेषज्ञ चिकित्सक, आवश्यक पूर्वाधार तथा उपकरणकाे कमी भएकाे डा. वस्तीले बताए ।
राज्य याे विषयमा गम्भीर नहुने हाे भने न्याय सम्पादनमा असर गर्ने उनकाे भनाइ छ । उनी भन्छन, ”याे विषयमा सबै जना चलिरहेकै छ भनेर बसिरहेका छन् । तर यसले न्याय सम्पादन जस्ताे विषयमा कतिकाे असर गर्छ त्याे विषयमा ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ तर अवस्था त्यस्तो छैन । राज्य बेखर छ ।” सरकारले गम्भीर भइ याे विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनकाे माग छ ।
Tagged चिकित्सक पोष्टमार्टम फरेन्सिक
लोकदोहोरी प्रतियोगिताको उपाधि नगरकोटका राजु केसीलाई
अर्जुनधारा प्रवेशद्वारको शिलान्यास
सार्कमा विवाद छैन: परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली
Tags: चिकित्सक, पोष्टमार्टम, फरेन्सिक